हेरौं त प्रस्तावित राजदूतका नालीबेली - नेपालबहस
ब्राजिलमा एकैदिनमा ४८ हजार संक्रमित, ६१ हजार भन्दा धेरैको मृत्यु
गृहपृष्ठ समाचार राजनीति हेरौं त प्रस्तावित राजदूतका नालीबेली
हेरौं त प्रस्तावित राजदूतका नालीबेली
काठमाडौं । दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त सरकार देशमा समृद्धि ल्याउने नारा घन्काइरहेको छ । सरकारमा आएको डेढ वर्ष वितिसक्दा पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले समृद्धि केवल नारामा सीमित गरिदिएको छ ।
सरकारका हरेक काम र निर्णय देश र जनताप्रति कम पार्टी र नेताप्रति बढी आशक्त छन् । जनताको नाममा राजनीति गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु व्यक्तिगत गुट चलाएर राज्यसंयन्त्रको दोहन गरिरहेका छन् । यो अभियानमा ओली सरकार यसअघिका सबै सरकारलाई उछिन्न सफल भएको छ । यसको पछिल्लो श्रृंखलाका रुपमा भर्खरै सिफारिस गरिएको विभिन्न चारजना राजदूतका अनुहार हेरे पुग्छ ।
अब त राजदूत बन्न नेताको हुक्के, बैठके र नातागोताका नजिकका मानिस भए पुग्यो योग्यता । हुनपनि शेर्पाको योग्यता भनेको स्व. पासाङ ल्ह्यामु शेर्पाको छोरी हुनु नै उनको सबैभन्दा ठूलो योग्यता बन्यो । साथै उनका काका आङ छिरिङ शेर्पा ओलीका भित्रिया थिए । आङछिरिङको गत फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भयो ।
आजको दुनियाँमा कूटनीतिको ठूलो महत्व छ । अझ आर्थिक कूटनीति अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्धा हो । संसारमा आर्थिक कूटनीतिलाई नै सबैभन्दा बढी महत्व दिने गरिन्छ । आर्थिक समृद्धि नै आजको कूटनीतिको मूल आधार हो । यसका लागि राज्यले लामो समय कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरेका र बुझेका मानिसलाई जिम्मेवारी दिने प्रचलन छ । तर वर्तमान ओली सरकार भने आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रुपमा कूटनीतिक क्षेत्रको समेत दुरुपयोग गर्ने अभियानलाई तीब्रता दिन उद्यत छ ।
ओली सरकारले भर्खरै मात्र चारजनालाई विभिन्न मुलुकको राजदूतमा सिफारिश गरेको छ । ती चारैजनाको विगत र अनुभव हेर्ने हो भने नेपालको समग्र प्रतिनिधित्व गर्ने खालको देखिन्न । केवल आफन्त र कार्यकर्ताको जागिरका लागि मात्र नियुक्त गर्न खोजिएको प्रतित हुन्छ । अन्यत्र भने कूटनीतिक क्षेत्रमा हाम्रो भन्दा राम्रो मान्छेको चयन गर्ने गरिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालका लागि विदेश मन्त्रीमा चयन गरेका एस. जयशंकरलाई हेरे पुग्छ । उनी भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ता होइनन् । समर्थक होलान् तर उनी मूलत कूटनीतिक क्षेत्रका ज्ञाता हुन् । अघिल्लो वर्षसम्म उनी विदेश मन्त्रालयका सचिव थिए । उनलाई मादीेले विदेश मन्त्री बनाए ।
अब हाम्रो अवस्था हेरौं । प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेका चारजना प्रस्तावित राजदूतको व्यक्तिगत विवरण । पहिला कुरा गरौं, स्पेनका लागि सिफारिस गरिएकी दावा फुटी शेर्पाको कुरा । कूटनीतिक क्षेत्रले यो नाम आजसम्म कहीं कतै सुनेको थिएन । परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना सहसचिवले भने– अब त राजदूत बन्न नेताको हुक्के, बैठके र नातागोताका नजिकका मानिस भए पुग्यो योग्यता । हुनपनि शेर्पाको योग्यता भनेको स्व. पासाङ ल्ह्यामु शेर्पाको छोरी हुनु नै उनको सबैभन्दा ठूलो योग्यता बन्यो । साथै उनका काका आङ छिरिङ शेर्पा ओलीका भित्रिया थिए । आङछिरिङको गत फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भयो ।
३४ वर्षीया दावा फुटीले कूटनीतिको क पनि जानेकी छैनन् । युरोपको स्पेन जस्तो मुलुकको राजदूतमा सिफारिश भएकी दावा फुटीले के काम गर्लिन् नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि भनेर सरकारले कुनै योजना कार्यक्रम दिएको छैन । देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने पदमा आफन्त भर्ती गर्ने उद्येश्य राखेर काम गर्न अग्रसर भएको सरकारबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने ?
अर्का पात्र हुन्– महेश दाहाल । नेपाली राजनीतिक वृत्तमा उनलाई तिहुन चखुवाको उपाधि मिलेको छ । गएको असोज महिनासम्म उनी नेपाली कांग्रेसको सक्रिय कार्यकर्ता थिए । चितवनका स्थायी वासिन्दा महेश विगतमा नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य हुन् । सुशील कोइराला सरकारका बेला उनी नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्ष पद पाउने सफल र चतुर कांग्रेसी थिए । तर समय फेरिएपछि उनले पुष्पकमल दाहालसँग काकाभतिजको साइनो जोडे । अनि पड्काएका छन् ,अष्ट्रेलिया जस्तो महत्वपूर्ण मुलुककोे राजदूत पद ।
यद्यपि तत्कालिन एमालेको विदेश विभागको सदस्य भईसकेका उनको सबैभन्दा ठूलो योग्यता भनेको पञ्चायतकालमा ओलीसँगै १२ वर्ष कारावास बस्नु नै हो । जेल वस्दा अक्सफोर्ड डिक्सनेरी कण्ठाग्र गरी घोकेका नारदले ओलीलाई अंग्रेजी पढाएका थिए । त्यसैको बदलामा उनलाई सिफारिश गरिएको छ कतारका लागि राजदूतमा ।
करिब एक लाख नेपाली बसोवास गर्ने अष्ट्रेलियासँग हाम्रो दरिलो कूटनीतिक सम्वन्ध छ । यो मुलुकमा पाको र लामो समय कूटनीतिक क्षेत्रमा खारिएको मानिसलाई राजदूत बनाइनु पर्ने हो । तर चतुर खेलाडी महेशको कूटनीतिक बृत्तमा के योगदान र अनुभव छ , त्यो नेपाली जनतालाई स्मरण छैन । पद र पैसाका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्नसक्ने खुबी भएका महेशले अष्ट्रेलियाबाट नेपाललाई के दिलाउने हैसियत र ल्याकत राख्छन् , भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
अर्का व्यक्ति छन् – नारद भारद्वाज । स्वभाव शालिन छ , अंगे्रजीका सहप्राध्यापक रहिसकेका उनी कूटनीतिक क्षेत्रको कुनै ज्ञान राख्ने अनुभवीमा भने पर्दैनन् । यद्यपि तत्कालिन एमालेको विदेश विभागको सदस्य भईसकेका उनको सबैभन्दा ठूलो योग्यता भनेको पञ्चायतकालमा ओलीसँगै १२ वर्ष कारावास बस्नु नै हो । जेल वस्दा अक्सफोर्ड डिक्सनेरी कण्ठाग्र गरी घोकेका नारदले ओलीलाई अंग्रेजी पढाएका थिए । त्यसैको बदलामा उनलाई सिफारिश गरिएको छ कतारका लागि राजदूतमा ।
ओली सरकार जसरी भएपनि मुुलुकको ढुकटी रित्याएर आफन्त र कार्यकर्ता पोस्ने एक सूत्रीय अभियानमा रहेको यसले प्रमाणित गरेको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली फगत देखाउने दाँत मात्र हो ।
झण्डै ५ लाख नेपाली कामदार रहेको मुलुक कतार नेपालका लागि ज्यादै संवेदनशील राष्ट्र हो । यहाँ पठाइने राजदूत कूटनीतिक क्षेत्रको ज्ञाता मात्रै भएर पनि पुग्दैन । खासगरी श्रमिकसँग जोडिने मुद्धालाई राम्ररी बुझ्न सक्ने र कूटनीतिक क्षेत्रको अनुभव समेत भएको व्यक्तिले मात्र कतारको समस्याको हल खोज्न सक्छ । यो मुद्धामा पनि ओलीले राम्रो भन्दा हाम्रो मान्छे नै छान्ने गल्ती गरेका छन् ।
त्यसैगरी राजदूतमा सिफारिस हुने अर्का भाग्यमानी छन् – डा. बंशीधर मिश्र । ने क पा नेता माधवकुमार नेपालका पिछलग्गु डाक्टर साहेवले चुनाव हारेपनि बेरोजगार हुनु परेन । अब उनी बंगलादेशको राजदूत बन्ने भएका छन् । उनी कूटनीतिक क्षेत्रका बारे कुनै जानकार होइनन् । उनको योग्यता भनेकै माधव नेपालको मनपर्ने मान्छे हुनु हो । ओलीले पनि नेपाललाई खुुसी पार्न बंशीधरको नाम राजदूतमा सिफारिश गरेका छन् । वंशीधर मेडिकल डाक्टर हुन् । तर उनी जनताको सेवा गर्ने हैसियतमा छैनन् । स्वास्थ राज्यमन्त्री भइसकेका उनको विवादास्पद मनमोहन अस्पतालमा लगानी छ । डा. गोविन्द के सी विरुद्ध चर्काे गुटबन्दी गरी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन उम्काउन उनी विगतमा धेरै सक्रिय थिए । यस्ता भ्रष्ट चरित्र भएका व्यक्तिले नेपालका लागि के काम गर्ने हुुन ? पत्याउन मुश्किल छ ।
यिनै चार जना प्रस्तावित राजदूतको नामले नै सरकारको आगामी कार्यदिशाबारे स्पष्ट गरेको छ । ओली सरकार जसरी भएपनि मुुलुकको ढुकटी रित्याएर आफन्त र कार्यकर्ता पोस्ने एक सूत्रीय अभियानमा रहेको यसले प्रमाणित गरेको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली फगत देखाउने दाँत मात्र हो ।
अघिल्लो लेखलोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन !
अर्को लेखस्याङ्जा बन्यो १ सय ५० मेट्रीकटन क्षमताको शीतभण्डार
ओलीले एमाले ब्युताउन लागेको बामदेवको आरोप
स्थायी कमिटीमा ओली नआउँदा मच्चियो हल्ला